Mandrakotra ny hazo → Famoronana vy sy fikorotanana vita amin'ny vy • CITY DESIGN
obecnie mari-trano kely tanàna izany koa Mandrakotra hazo. Ireo singa miasa sy aesthetic ireo dia azo atao amin'ny fitaovana isan-karazany.
Ny hazo manatrika an-tanàn-dehibe dia antoky ny fahasalaman'ny mponina, fitsaharana ary fahatsapana fahatsapana ho an'ny olona mijanona ao amin'ny tontolo maitso. Manadio ny rivotra ny hazo, manamboatra oksizenina, mampihena ny hafanana ambim-bava amin'ny andro mafana, mampitombo ny hamandoana ny rivotra, manatsara ny fitantanana ny rano ary mampihena ny fitabatabana ny tanàna sy ny rivotra.
Na izany aza, mba hahafahan'izy ireo maniry sy mivoatra araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy arovana amin'ny loza manimba izay mety hamotika azy ireo.
Izany no mahatonga ny sarona hazo dia ampiasaina matetika kokoa ary matetika, izay tonga lafatra tsy ao ihany parks ary eny an-kianja, fa koa amin'ny promenades sy ny an'ny tanàna.
Miaro hazo amin'ny biby, mpandeha an-tongotra ary fiara mitondra fiara ny sarony.
Mandrakotra hazo sy metaly ary manary makiazy
Ny hazo voasarona sy ny valiny ho an'ny hazo vy sy ny cast-iron dia mamorona miaro haingon-trano ho an'ny zavamaniry izay tsy any an-tanàn-dehibe ihany, fa ao koa zaridaina.
Ireo dia vokarina amin'ny habe sy endriny samihafa.
Ny fonon'ilay hazo vy vy dia manana endrika kanto sy haingo maoderina hifanaraka amin'ny toerana an-tanan-dehibe sy ambanivohitra.
Ireo mpiambina hazo dia natao ho fiarovana azy ireo dia mety amin'ny fisarahana na mitsangana.
Ny fonony, namboarina toy ny marindrano, i.e. Mamatotra ny hazo, miaro ny rafi-pandavan'ny hazo amin'ny fahasimban'ny mekanika, eo am-piantohana rano mikoriana maimaimpoana.
mijidina Mandrakotra hazo manatanteraka fiarovana sy aestetika izy ireo, miantoka ny fitomboan'ny zavamaniry tsy misy fandrahonana avy amin'ireo mpandalo, fiara na biby.
Ny fomba mety amin'ny fonony hazo ampiasaina dia mahatonga azy ireo ho singa mandrafitra haingon-trano kely iray.
Ny vy vita amin'ny vy sy kanto ho an'ny hazo dia fiarovana tena ilaina amin'ny hazo, ary noho ny endriny sy ny lokony maoderina, lasa firavaka amin'ny habaka ho an'ny daholobe izy ireo.
Mandrakotra hazo ny maritrano kely, izay misy am-pahombiazana amin'ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe, izay nampiasain'ny zava-maitso an-tanàn-dehibe tao anatin'ny toerana voafetra, ho haingo voajanahary amin'ny famolavolana lalan'ny fivarotana sy fifandraisana.
Mandrakotra ny hazo ho an'ny hazo dia vahaolana aesthetic miaro ny zavamaniry an-tanàn-dehibe, fa miaraka amin'izay koa, mamela malalaka ny rano malalaka mankany amin'ny rafitra faka.
Ireo hazo ao an-tanàna dia tena marefo amin'ny fahavoazana, tsy ny fahavoazana simika, ohatra, vokatry ny fihozongozona be loatra amin'ny fiara, fa koa simba amin'ny mekanika. Noho izany dia mitaky fikarakarana manokana izy ireo. Noho izany, any amin'ny toerana misy habaka voafetra sy fivezivezena be fiara sy mpandeha an-tongotra, dia tokony harovana manokana ny faritra maitso. Ny fonon'ny hazo mety dia miaro ny zavamaniry tsy amin'ny vazivazy ihany, fa amin'ny zavatra hafa.
Ny grilles mitsivalana sy ny fonony mitsangana vita amin'ny vy nify sy vy dia mahatohitra fatratra ny zavatra ivelany sy ny fahasimban'ny mekanika ka miaro tanteraka ny hazo izy ireo. Ireo singa fonon-kazo, namboarina sahaza ny hazo sy ny habakabaka an-tanàn-dehibe, dia haingo fanampiny amin'ny toerana.
Ny endrika nentin-drazana na maoderina dia mitafy tsara amin'ny toetran'ny toerana an-tanàn-dehibe.
Ireo mpiambina hazo menaka dia ampiasaina koa ao amin'ny zaridaina an-trano sy orchards, izay mahomby miaro ny hazo fihinam-boavina amin'ny fahasimbana ateraky ny biby mikiky ny hodi-biby na ravina hazo. Rakotra hazo ny voankazo izy ireo dia ilaina tahaka ny any an-tanàn-dehibe, raha miantoka ny fiarovana ny zavamaniry ao amin'ny zaridaina sy ny trano fitobiana.
Indraindray, ny lalao amam-borona na ny mpanosihosy mamoaka hazo dia manimba ny hazo tsy azo ovaina, indrindra fa ireo faribolana indrindra. Ny fonon'ny hazo mety dia mamela azy ireo hitombo am-pitoniana.
Ny fonon'ny hazo misy lavaka kely dia hanaporofo ny tenany manokana mandritra ny ririnina, rehefa mitady sakafo sy tantanana maimaika amin'ny hazo ao anaty zaridaina ny angady sy ny serfa. Ny fonony toy izany dia hanome rivotra sy hazavana ampy, ary miaraka amin'izay dia manakana ny biby tsy hanimba ny vatan'ny hazo.
Mba tsy hanimba ny fakany ny hazo fihinam-boa sy ny hazo ornamente mandritra ny fikosehana, dia ilaina ny mampiasa takalony hazo izay manarona ny fakany ary manakana ny fambolena ahitra manodidina ny hazo.
Ireo fonon'ny hazo dia nanjary singa matetika amin'ny fiarovana ny zavamaniry sy ny faritra maitso an-tanàn-dehibe amin'ny fahasimban'ny mekanika. Ho fanampin'ireo sarony, isan-karazany ny famolavolana hazo dia ampiasaina hiarovana ny rafi-pandavan'ny hazo amin'ny fahasimbana ary hiantohana ny fidirana amin'ny rano amin'ny hazo.
Hitanisa ity pejy ity Lahatsoratra miavaka
4.9 / 5 ( 29 vato )
casro mouro ho an'ny hazoHazo grésvidin'ny latsagrika hazo manitragramatika vy ho an'ny hazomanary makiazy ho an'ny hazomanary varahina vy amin'ny vidin'ny hazotrano maritrano kely fialofanamandrakotra ny hazo ny hazovoaloton'ny hazo metalyMandrakotra hazofivarotana hazo voakasarina ho an'ny hazo castamorvidin'ny hazohazo baoty leroy merlinmandrakotra hazo mangamandrakotra ny hazo obimandrakotra hazo olivafanantonana hazo voankazofanantonana hazo voankazo Allegrony vidin'ny hazo voankazovarotra hazo fambolenahazo mpamokatra hazoFonony fiarovana ho an'ny hazorakotra hazo ny hazoMpiambina hazo sy metaly ary manary makiazymandrakotra ny hazo ny hazoMandrakotra hazohazo manarona vidinyhazo dia mandrakotra ny maritrano kelymandrakotra hazo voavoa vita amin'ny hazovidin'ny hazo casing perforatedsarona hazo mora vidymanarona vy ho an'ny hazo